Nagu saabsan - Xingtai Tianzheng Sealing Co., Ltd.
Xingtai Tianzheng Sealing Co., Ltd. waa soo saare xirfadle ah oo ka sameysan badeecada caag soo saarka oo la aasaasay sanadkii 2010, wuxuuna ku yaal magaalada Xingtai, Gobolka Hebei ee Shiinaha, wuxuu u dhow yahay caasimada Beijing iyo dekadda Tianjin Waxaan haynaa R & D kan ugu awoodda badan uguna horumarsan, iibka iyo kooxaha wax soo saarka, gebi ahaanba in ka badan 100 shaqaale. Shirkadeena waxay leedahay teknoolojiyad gaar ah iyo qalab casri ah. Noocyo kala duwan ayaa la soo saari karaa oo ay ka mid yihiin EPDM, PVC, VITON, NBR, SILICON iyo strips isbuunyo. Iyada oo ku saleysan saldhigan, waxaan soosaari karnaa albaabbada albaabbada, daaqadaha daaqadaha, qafisyada golaha, xargaha farsamada .Badeecooyinka ugu muhiimsan waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa gawaarida iyo dhismaha warshadaha. Alaabtu waa iib kulul oo adduunka oo dhan ka socda.
Xingtai Tianzheng seal Co., Ltd. waa shirkad dhammaystiran oo soo saarta noocyo kala duwan oo qalabka gawaarida ah sida gawaarida, mootooyinka, koronto-dhaliyeyaasha, goobaha saliidda, maraakiibta, mashiinnada injineernimada, iwm. , Goomaha tuubbada qiiqa, shaabadda saliidda, shaabadda saliidda waalka, shaabadda biyaha, xirmo dib-u-hagaajin ah, xirmo dayactir yar, kabaha bareegga mootada, gawaarida, weelka, dhismaha iyo qurxinta qalabka wax lagu xiro, shaandhada, fiilada korantada sare, iwm. tiknoolajiyada wax soo saarka khadka, waxay soo bandhigtaa aaladaha tiknoolajiyada tayada sare leh, waxayna dejisaa nidaam cusub oo ah habka horumarinta caaryada. Marka loo eego baahida macaamiisha wakhti kasta, waxaan horumarin karnaa alaab qancisa macaamiisha muddo gaaban. Alaabooyinka ka imanaya horumarinta iyo wax soo saarka ilaa iibinta, waxa jira nidaam maamul oo dhammaystiran, oo hagaajinaya tayada wax soo saarka. Kala duwanaanta wax soo saarka, tayada, qiimaha macquulka ah, adeegga meesha yaala, ku guuleysta kalsoonida macaamiisha, alaabada waxaa loo dhoofiyaa Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Afrika, Koonfurta Ameerika iyo dalal kale oo badan. Tayadu waa aasaaska badbaadada shirkadda, sumcadduna waa aasaaska horumarka shirkadda, adeeguna waa isha laga helo barwaaqada shirkadda. Xingtai Tianzheng seal Co., Ltd. waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso dadka indheer garadka ah adduunka oo dhan si loo abuuro mustaqbal wanaagsan.
Alaabtayada waxaa loo iibgeeyaa Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Afrika, Koonfurta Ameerika iyo dalal kale oo badan iyo gobollo sababtoo ah badeecadeenna oo dhammaystiran, tayo la isku halleyn karo, qiimo macquul ah iyo adeeg wanaagsan. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan si xor ah nala soo xiriir, shaqaalaheenna ayaa kula soo xiriiri doona markii ugu horreysay.